စိတ္ညစ္စရာေတြကို သူမ်ားေတြဆီ မမွ်ေ၀ျခင္းကလည္း ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ကုသိုလ္ပဲလို႕ ဆိုလာတဲ့ ေအးေသာင္း – Zeekwat Hot News
May 17, 20190292
တေန႕တျခား အလွေသြးမ်ား စုရံုးလာတာနဲ႕အညီ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားတစ္ခုကိုလည္း ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ ေအးေသာင္းက ရင့္က်က္တဲ့အေတြးအေခၚေလးမ်ားကို ပရိသတ္မ်ားထံကို ခ်ျပေလ့ရွိသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးေသာင္းက စိတ္ညစ္စရာေတြကို သူမ်ားေတြဆီ မမွ်ေ၀ျခင္းကလည္း ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ကုသိုလ္တစ္မ်ိဳးပဲလို႕ ဆိုလာခဲ့ပါတယ္။
ေအးေသာင္းက “ကုိယ္ရဲ႕ Facebook ထဲမွာ စိတ္ခံစားမႈေၾကာင့္ Post အရမ္းတင္ခ်င္ေပမယ့္လည္း ‘သူမ်ားေတြ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္မွာမုိ႔ မတင္ေတာ့ပါဘူးေလ’ ဆုိၿပီး စိတ္ကုိ ကိုယ့္လို ျမိဳသိပ္လုိက္တဲ့သူေတြရွိမွာပဲလုိ႔ ေတြးမိတယ္။ အဲလုိစိတ္ နဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြကုိလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သူမ်ားေတြကုိ စိတ္ညစ္စရာေတြ share မလုပ္ခ်င္တာ။ မကူးစက္ေစခ်င္တာ။ ဒါလည္း ခ်စ္စရာ ကုသုိလ္တစ္မ်ိဳးပဲေလ… ေျပာမဲ့သာေျပာတာ စိတ္ေတာ့ေကာက္တတ္တယ္ေနာ္ ဟြန္႔ 💛💛💛” ဆိုၿပီး ေမလ (၁၇) ရက္ေန႕က သူမရဲ႕ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
လတ္တေလာမွာပဲ ဒီဇိုင္နာမင္းသက္စံရဲ႕ တကိုယ္ေတာ္ျပသခဲ့တဲ့ ဖက္ရွင္႐ွိဳးပြဲေလးကို သြားၿပီးအားေပးခဲ့တဲ့ ေအးေသာင္းရဲ႕ပြဲတက္ဖက္ရွင္ေလးက အရမ္းလွပေၾကာ့ရွင္းၿပီး ေအးေသာင္းနဲ႕လည္း အလြန္လိုက္ဖက္လွပတာေၾကာင့္ ျမင္သူတိုင္း သေဘာက်ေငးေမာသြားေစခဲ့ပါတယ္။
တနေ့တခြား အလှသွေးများ စုရုံးလာတာနဲ့အညီ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကိုလည်း ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ အေးသောင်းက ရင့်ကျက်တဲ့အတွေးအခေါ်လေးများကို ပရိသတ်များထံကို ချပြလေ့ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အေးသောင်းက စိတ်ညစ်စရာတွေကို သူများတွေဆီ မမျှဝေခြင်းကလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲလို့ ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။အေးသောင်းက “ကိုယ်ရဲ့ Facebook ထဲမှာ စိတ်ခံစားမှုကြောင့် Post အရမ်းတင်ချင်ပေမယ့်လည်း ‘သူများတွေ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်မှာမို့ မတင်တော့ပါဘူးလေ’ ဆိုပြီး စိတ်ကို ကိုယ့်လို မြိုသိပ်လိုက်တဲ့သူတွေရှိမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ အဲလိုစိတ် နဲ့ လုပ်ရပ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူများတွေကို စိတ်ညစ်စရာတွေ share မလုပ်ချင်တာ။ မကူးစက်စေချင်တာ။ ဒါလည်း ချစ်စရာ ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲလေ… ပြောမဲ့သာပြောတာ စိတ်တော့ကောက်တတ်တယ်နော် ဟွန့် 💛💛💛” ဆိုပြီး မေလ (၁၇) ရက်နေ့က သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။လတ်တလောမှာပဲ ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံရဲ့ တကိုယ်တော်ပြသခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲလေးကို သွားပြီးအားပေးခဲ့တဲ့ အေးသောင်းရဲ့ပွဲတက်ဖက်ရှင်လေးက အရမ်းလှပကြော့ရှင်းပြီး အေးသောင်းနဲ့လည်း အလွန်လိုက်ဖက်လှပတာကြောင့် မြင်သူတိုင်း သဘောကျငေးမောသွားစေခဲ့ပါတယ်။သီချင်းနဲ့ ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားများစွာတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းဟာ တစ်ချိန်တစ်ခါက လူကြိုက်များအားပေးခဲ့ရတဲ့ အနုပညာရှင်မလေး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူမဟာ (၁၀) စုနှစ်တစ်စုကျော် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး (၂၀၁၇) ခုနှစ်တွင် အနုပညာလောကထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် မအေးသောင်းဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပိုးထည်ဆိုင်တွေကိုလည်း ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Hey Buddy!, I found this information for you: "စိတ္ညစ္စရာေတြကို သူမ်ားေတြဆီ မမွ်ေ၀ျခင္းကလည္း ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ကုသိုလ္ပဲလို႕ ဆိုလာတဲ့ ေအးေသာင္း". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/953. Thank you.